तपाईंको बाथरूम सजाउन ढुone्गा | सजाउनुहोस्
ढुone्गा, बाथरूम सजावटको लागि एक प्रवृत्ति सामग्री
मारिया vazquez | | बाथरूम, सजावट
यदि तपाइँ घरको बाथरूममा काम गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ भने, तपाइँ सायद यसको सजावटको लागि कस्तो सामग्री छनौट गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ: टाईलहरू वा ढु stone्गा? डेकुरामा हामीले तपाईसँग बिभिन्न बारेमा लम्बाइमा कुरा गरेका छौं टाईल्स को प्रकारहरु र अझै थोरै ढु stone्गा, एक प्राकृतिक तत्व जुन धेरै चाखलाग्दो छ।
ढु stone्गा एक भएको छ प्रचलन सामग्री। क्वार्टजाइट, फाइलाइट, स्लेट, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चुनढुंगा ... यो सामग्री द्वारा प्रस्तावित संभावनाहरू धेरै छन्। बाथरूम सजावट गर्दा, यो सबै प्रख्यात दिनुहोस् र धेरै तत्वहरूको साथ ठाउँ ओभरलोड नगर्न प्रयास गर्नुहोस्।
una ढु stone्गाको पर्खाल यो आफैले तपाईको बाथरूमको रूप परिवर्तन गर्दछ। यो प्राकृतिक तत्व एक महान सजावटी बल छ। त्यहाँ तपाईको बाथरूम लाई धेरै भन्दा बढी avant-garde को एक स्पर्श प्रदान गर्न सक्षम ढु stones्गाहरू छन्, तर "कच्चा" प्राकृतिक पत्थर यसलाई देहाती स्पर्श दिन सक्षम छन्।
समयमा बाथरूम सजावट तपाईंले दुबै प्रकारको पत्थरको प्रकार र ढाँचालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। प्राकृतिक पत्थर एक धेरै चाखलाग्दो तर महँगो विकल्प पनि हो। तपाईं टाइलको रूपमा कोटिंग्स र / वा नक्कलको विकल्प पनि अप्ट इन गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै सजिलो प्लेसमेन्टको साथ!
ढु stone्गाको साथ खाली ठाउँ सजाउने क्रममा तपाईले के सधैं मनमा राख्नुपर्दछ कि त्यो धेरै तत्वहरूसँग रिचार्ज हुँदैन, यो आवश्यक छैन! यदि तपाइँ छनौट गर्नुभयो भने बाथरूम भव्यतामा प्राप्त हुनेछ सरल र शान्त फर्नीचर सेतो, कालो वा काठ र विवरण दुरुपयोग नगर्नुहोस्।
ढु stone्गाले तपाईको बाथरूमलाई एक फरक टच दिन्छ। के तपाई जोखिम लिन इच्छुक हुनुहुन्छ? याद गर्नुहोस् कि यस प्रकारको सजावटको नतीजा धेरै मा निर्भर गर्दछ टोन र बनावट; एक वा अर्कोको लागि विकल्प रोज्नु अघि बिभिन्न विकल्पहरू तुलना गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » बाथरूम » ढुone्गा, बाथरूम सजावटको लागि एक प्रवृत्ति सामग्री
बच्चाहरूको कोठा पूर्ण रंगमा सजाइएको
शेभ्रन पट्टिहरु संग सजावट